गौरादहका किसानले पाएनन् रासायनिक मल - Jhapa Online
गौरादहका किसानले पाएनन् रासायनिक मल
गौरादह, १३ असोज । धान पोटाउने समयमा युरिया मल नपाउँदा किसानहरु समस्यामा परेका छन् ।
धान रोप्ने समयमा डि.ए.पी. मल नपाएर समस्यामा परेका किसानहरु अहिले युरिया नपाउँदा थप समस्यमा परेका हुन् । किसानहरुले खेती गर्ने समयमा पटक–पटक मलको समस्या खेप्तै आएका छन् ।
मुलुक भित्र वसोवास गर्ने अधिकांस मानिसहरुको प्रमुख पेसा कृषी नै हो । अन्य आम्दानीको श्रोत नभए पछी गाउँघरमा वसेर खेती किसानी गर्ने गरेका छन् । कृषी प्रधान देश भनिएता पनि किसानहरुले कृषीमा कुनै प्रकारको राहात पाएका छैनन् । धान रोप्ने समयमा डि.ए.पी. नपाँउदा मलको हाहाकार मच्चिएको थियो भने, अहिले युरिया मल नपाउँदा किसानहरु निरास भएका छन् ।
कृषि सामग्री संस्थान र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीबाट झापाको दक्षिणी क्षेत्रका डिलरहरुमा युरिया मल आउँछ भन्ने हल्ला चलेपछि किसानहरु तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै आएर डिलर भेला भएका हुन्छन् । मल थोरै मात्रामा आउँँदा किसानहरुले गाडीबाटै मल उठाएर लाने गरेका छन् ।
गौरादह नगरपालिका–२ का किसान मित्रबहादुर बस्नेतले प्रत्येक साल खेती गर्ने समयमा मल बिउको हाहाकार हुने बताउँछन् । उनले भने, ‘कृषिप्रधान देश भनेर प्रचार गर्ने सरकारले किसानहरुलाई कुनै प्रकारको राहत दिन नसक्नु लज्जास्पद होे ।’
गौरादह–७ का अर्का किसान वेदप्रसाद चुँडालको भनाइ पनि उस्तै छ । बाली लगाएदेखि बाली उठाइसक्दा समेत किसानलाई समस्यै–समस्या छ । बाली लगाउने समयमा मल बिउ नपाउनु, धानमा रोग लाग्दा कुन रोग लागेको हो पहिचान हुन नसक्नु र उपचार के गर्ने भन्ने थाहा नहुनु किसानको सधैँको समस्या हो भने उचित मूल्य नपाउनु अर्को प्रमुख समस्या हो ।’
धान पोटाउने समयमा युरिया मल आवस्यक पर्छ तर बजारमा छैन । युरिया मलको खाँचो परेकाले बजारमा नपाइएपछि किसानहरुले भारतबाट लुकाइ छिपाइ कम गुणस्तरको युरिया मल महँगो मूल्यमा खरीद गरी खेतमा लगाउन बाध्य हुनु परेको छ ।
किसानहरुलाई राहत दिन र समय अनुकूल उनीहरुका समस्याप्रति सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ । किसानहरुलाई आप्mनै क्षेत्रमा बसेर रोजगारीका अवसर सिर्जना गराउन र किसानको आयस्तर उकास्न समयमा सिँचाई, मल, बिउ, किटनासक औषधि उपलब्ध गराउन आवश्यक छ ।